Mụbaa okporo ụzọ Nchọgharị Ọchụchọ
Izu a a kpaliri m ime nyocha mgbe m chọpụtara otu SEO ọkachamara a na-akwalite ya na ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ ọzọ. Na SEO guru na ajụjụ nwere blog nke nọ kemgbe ọtụtụ afọ karịa nke m - yabụ enwere m ọchịchọ ịtụle ọnụ ọgụgụ anyị. M na-agwa ọtụtụ ndị ahịa na njikarịcha njin ọchụchọ, mana akpọtụbeghị m onwe m ọkachamara.
M na-agbanwe aha m dabere na ntụnyere nke nwoke a… onye nwere SEO na azụmaahịa weebụ nke nọgoro ogologo oge karịa nke m, jikọtara ya na ụlọ ọrụ mara mma nke nwere ọtụtụ ndị ahịa dị egwu nke nwere ike iji nnukwu ego ya.
The Onye ọkachamara SEO edeghị ọkwa # 1 maka otu mkpụrụokwu asọmpi.
The Martech Zone ọkwá # 1 maka 31 asọmpi Keywords.
The Onye ọkachamara SEO guzobere maka isiokwu iri na itoolu n'ozuzu.
The Martech Zone kwubiri maka mkpụrụokwu 741.
The SEO ọkachamara si blog na-họọrọ banyere 87,000 site Alexa.
The Martech Zone Ọ bụ Alexa nwere 47,000.
Martech Zone ka na-achọta na blọọgụ ahịa 100 kacha elu na Ịntanetị. The SEO ọkachamara na Web Marketing blog adịghị ọbụna na ndepụta.
N'ezie, ebe ọ bụ na ịmalite azụmahịa nke m, nke m organic search engine okporo ụzọ ka Martech Zone amụbawo site na 84%:
Blọọgụ na-adọrọ mmasị na nchọta ihe nchọta n'ihi na ha na-enye nyiwe ebe ị nwere ike ide ọdịnaya ugboro ugboro ma weta ya n'ụzọ dị mma maka igwe nchọta iji chọta na ndeksi. Onweghi usoro m jiri wee mee ihe nzuzo… n'eziokwu edere m ha niile na eBook m, De blọgụ maka SEO ma gbasaa na nke ahụ site na akwụkwọ a na-ebipụta n'oge ọkọchị na-abịa.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị chọrọ enyemaka ụfọdụ na njikarịcha Nchọgharị Nchọpụta gị, ị nwere ike ịkpọ otu n'ime ndị ahụ SEO Ndị ọkachamara… Ma obu inwere ike inye DK New Media a oku na-aga… ụlọ ọrụ ndị mụbara okporo ụzọ Injin Nchọgharị ya site na 84% karịa ọnwa asaa gara aga. Ọ bụ gị na nhọrọ!
N'ezie, ihe mmụta bụ 'ịtụkwasị obi ma nyocha'. Naanị n'ihi na onye kwuru onwe ya ọkachamara nwere blog, ụlọ ọrụ ma ọ bụ akwụkwọ, anaghị eme ka ha bụrụ ọkachamara. Nsonaazụ na-eme ka ha bụrụ ọkachamara!
Ọ bụrụ na ịchọrọ otu akwụkwọ ebook n'efu, naanị denye aha na blọọgụ m site na RSS ma ọ bụ site na email ma ị ga-ahụ njikọ na nkụnye eji isi mee nke ndepụta ahụ. Njikọ ahụ ga-akpọrọ gị gaa na peeji nke ga-ebupụta njikọ njikọta.
Tags: seo ọkachamaraseo ọkachamaransonaazụ seo
Dee 28, 2009 na 6: 57 AM
Kwesịrị nke ọma! Damnụ achọwo ezigbo ọdịnaya ebe a.
Dee 28, 2009 na 8: 55 AM
Abụkwa m 'ụlọ akwụkwọ ochie' dị ka Douglas ma jụ ugbu a ịkpọ onwe m ọkachamara… rue mgbe m jiri arụmọrụ m na nsonaazụ m tụnyere nke ndị akpọrọ ọkachamara na dịka Douglas juru ya anya site na nsonaazụ ahụ! Cleary enwere PR wee nwee nsonaazụ… na ha abụọ anaghị agakọ ọnụ.
Dec 28, 2009 na 2:54 PM
Daalụ nke ukwuu Ben! Ndị ọzọ gbakwunyere agbakwunyela ụda na mkparịta ụka a na Blog Technology Technology!
Dec 28, 2009 na 2:55 PM
Oscar, ọ nwere ike
Oge eruola ịmalite ịgbanwe aha gị, Oscar! 😀
Ọ dị ịtụnanya mmadụ ole nọ ebe ahụ na-akpọ onwe ha ndị ọkachamara SEO wee mgbe ị na-anakọta data gbasara saịtị nke ha, ị ga-ajụ ajụjụ banyere kedu ihe akaebe gị na ị bụ ọkachamara SEO?
Kedu otu esi egosi ngwa ọrụ ma ọ bụ abụọ onye ahịa nwere ike iji aka Google Insights ma ọ bụ Alexa na di na nwunye na-enyo enyo iji mepụta ọnụọgụ gị ka ha nwee ike ịme otu ihe mgbe ha na-ele anya "iku" ọkachamara SEO ọzọ, nchekwa data nchekwa, wdg.
Kuziere ha ihe zuru oke gbasara ịkụ azụ ma mara azụ dị mma dịka gị.
Eziokwu PR na sayensị bụ ihe dị jụụ iji nye ndị ahịa.